Hiala ato An-trano Ihany ve Aho sa Tsia? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ossète Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tiorka Tseky Tsonga Turkmène Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Nahoana aho no te handeha?
Efa vonona ve aho?
Nataon’Andriamanitra handao ny ray aman-dreniny ny tanora rehefa lehibe, ka hanana ny tokantranony. (Genesisy 2:23, 24; Marka 10:7, 8) Ahoana anefa no hahalalanao raha efa mahavita tena ianao? Ireto misy fanontaniana telo mila eritreretinao:
Jereo hoe inona avy no tena mahatonga anao te hiala ao aminareo.
Mankaleo ahy ny olana ao an-trano
Tsy te ho voafehifehy be
Te hohajain’ny namako
Misy namako mila olona hiara-mipetraka aminy
Te hanao asa an-tsitrapo any an-toeran-kafa
Te hianatra hahaleo tena
Tsy tiako ho lany vola amiko intsony ny ray aman-dreniko
Tsy hoe ratsy ireo, nefa mila mandinika tsara ianao. Misy ankizy te hiala ao an-trano satria tsy te ho voafehifehy. Mety ho diso fanantenana anefa izy!
Nipetra-drery elaela, ohatra, i Diary, tamin’izy 20 taona. Hoy izy: ‘Tsy maintsy misy foana ny zavatra tsy azonao atao. Mba te hanao izay tianao ianao, nefa tsy manam-bola na tsy maintsy miasa.’ Tsy tokony ho maika hanapa-kevitra àry ianao, na dia misy mampirisika aza.—Ohabolana 19:2.
Toy ny hoe hilasy any an’ala ianao, rehefa hiala ao aminareo. Misy zavatra vitsivitsy mila hainao vao afaka mandeha ianao
Toy ny hoe hilasy any an’ala ianao rehefa hiala ao aminareo. Handeha ve ianao raha tsy hainao akory ny manangana lay, mandrehitra afo, mahandro sakafo, na mijery sarintany? Mazava ho azy fa tsia! Tanora maro anefa no miala ao an-trano na dia mbola tsy mahay manao raharaha aza.
Nilaza i Solomona, mpanjaka hendry, fa mandinika tsara ny olona malina. (Ohabolana 14:15) Diniho àry ireto mba hahitanao raha efa mahavita mipetra-drery ianao na tsia:
Mitantam-bola: Hoy i Serena, 19 taona: ‘Matahotra aho hoe tsy hahay hitantam-bola. Ny tao an-trano foana tsinona no niantoka an’izay zavatra nilaiko.’ Ary ianao? Ahoana no hahaizanao mitantam-bola?
Hoy ny Baiboly: “Hihaino ny hendry ka hitombo ny zavatra fantany.” (Ohabolana 1:5) Anontanio àry ny ray aman-dreninao hoe ohatrinona eo ho eo isam-bolana no lanin’ny olona iray amin’ny sakafo, hofan-trano, saran-dalana, ary jiro sy rano. Asaivo atorony avy eo ny fomba hitsinjarana ny volanao mba handoavana izany.
Manao raharaha: Nilaza i Dimby, 17 taona, fa ny manasa lamba no tena atahorany hoe tsy ho vitany. Ahoana àry no hahalalanao raha efa mahavita mipetra-drery ianao na tsia? Hoy i Aron, 20 taona: ‘Ataovy toy ny hoe mipetra-drery ianao, mandritra ny herinandro. Ianao no mandoa ny saran-dalanao. Ianao koa no manasa sy mipasoka ny lambanao, manadio ny efitranonao, ary miantsena sy mahandro ny sakafonao. Ny volanao ihany ampiasaina.’ Mahasoa anao izany, satria: 1) Lasa mahay zavatra ianao, 2) Lasa mankasitraka kokoa an’ireo ray aman-dreninao.
Mifandray amin’olona: Miady lava amin’ny olona ao an-tranonareo angamba ianao, ka te hiala ao. Aleonao miara-mipetraka amin’ny namanao. Hoy anefa i Anja, 18 taona: “Nisy namako roa niara-nipetraka. Mpinamana be ry zareo, nefa lasa niady foana. Ny iray mantsy madio sy milamina, fa ny iray tsy hoatr’izany. Ny iray tia fivavahana, fa ny iray kosa eo ho eo. Tsy nifanaraka mihitsy ry zareo!”
Inona àry no tokony hataonao? Hoy i Faniry, 18 taona: “Ao amin’ny dadanao sy mamanao ianao no tena mianatra mifandray amin’olona. Mianatra mandefitra sy mandamina olana tsinona ianao ao. Misy ankizy miala ao amin’ny ray aman-dreniny satria leo miady amin-dry zareo. Mandositra olana fotsiny anefa izy, fa tsy mahay mandamina an’ilay izy.”
Mahavita manompo foana an’Andriamanitra: Misy tanora miala ao an-trano, satria tsy vitany, hono, ny mianatra Baiboly foana sy manompo an’Andriamanitra hoatran’ny ray aman-dreniny. Ny hafa kosa nieritreritra ny hanao an’ireo ihany, saingy lasa varimbariana na naditra. Inona no azonao atao mba hanompo an’Andriamanitra foana ianao, fa tsy ho ‘vaky sambo amin’ny finoana’?—1 Timoty 1:19.
Mila manokana fotoana ianao mba hianarana Baiboly sy hivoriana ary hitoriana. Soraty eo amin’ny kalandrie ilay izy, ary jereo raha vitanao mandritra ny iray volana. Tohizo foana izany, fa aza miandry hotenenin’ny ray aman-dreninao.
Aoka hatao hoe leon’ny olana ao aminareo ianao na tsy te ho voafehifehy, ka aleonao mandeha. Fantatrao ve fa tsy mety izany? Te hiala olana fotsiny mantsy ianao, fa tsy mieritreritra ny fiainanao aorian’izay. Toy ny hoe mitondra fiara ianao, nefa ny fitaratra fijerena ny ao aoriana foana no ifantohanao fa tsy ny lalana. Ny toerana efa nandalovanao no eritreretinao fa tsy izay halehanao. Aza maika hiala ao aminareo àry. Aleo aloha manana tanjona tsara vao mandeha.
Na inona na inona tanjonao, dia aza maika hanapa-kevitra. Hoy ny Baiboly: “Ahazoan-tombony ny fandaminana mialoha ataon’ny mazoto, fa hahantra kosa izay rehetra maimaika.” (Ohabolana 21:5) Araho ny tenin’ny ray aman-dreninao. (Ohabolana 23:22) Mivavaha, ary saintsaino ny torohevitry ny Baiboly noresahina tato.
Aza variana mieritreritra àry hoe: ‘Hiala ato an-trano ihany ve aho sa tsia?’ Diniho kosa aloha hoe: ‘Efa mahavita mamelon-tena sy mikarakara tena ve aho?’ Efa afaka mahaleo tena ianao raha mahavita an’ireo.